गर्भदेखि बर्गसम्म नारी हिंसा जारीछ
यसपाली पनि नारी दिवस मनाइयो । सहर बजारका नारीहरुले धुमधामले नारी दिवसको झ्याली पिटे, तारे होटलहरुमा हृवीस्कीको चुस्की र चिकन, मटनसहितका डिनर पनि चल्यो । आम नारीका लागि नारी दिवस आएको र गएको पत्तै भएन । नारी दिवस किन मनाइन्छ, नारी दिवस भनेको के हो, नारी दिवसको महत्व नारीहरुका लागि कति छ ? यसबारे धेरैलाई थाहै छैन ।
नारी दिवसबारे देशभरिका नारीहरुलाई जानकारी दिने दायित्व कसको ? संसदमा नारी छन्, राजनीति र समाजसेवामा नारी छन्, सरकारमा नारी छन्, राष्ट्रपति नारी छिन्, चार लाइनको शुभकामना मन्तव्य दिएर अथवा चेतनशील नारीहरु एकआपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरेर नारी दिवसको गरिमा र महिमा, यसको महत्व शिद्ध हुनसक्छ ? सबैलाई थाहा छ, देशका नारीहरु प्रत्येक दिन घरदेखि समाजसम्म, सहरदेखि संसदसम्म पनि हिंसाका सिकार भएका छन् । जबसम्म नारीमाथि हिंसा हुन्छ, समानताको व्यवहार हुँदैन, सार्वजनिक यातायातमा समेत नारीको थरि थरिका बलात्कार भइरहन्छ, तवसम्म नेपालमा नारी दिवस मनाउनु, नारी दिवस आउनु र जानुको कति अर्थ रहला र ?
धनाध्येदेखि मध्यमबर्गमा सबैभन्दा बढी नारी हिंसा जारी छ । कोखमा बच्चा बस्यो कि छोरा कि छोरी ? भनेर जचाउनेको भीड देखिन्छ । आमाको कोखमा छोरी छ भने भ्रुण हत्या गर्ने गरिन्छ । कानुन छ, कानुनले काम गरिरहेको छैन, डाक्टरी पेशामा सपथ खाइन्छ तर सपथ एकातिर मिल्काएर पैसा कमाउने धन्दा बनाएका छन् अनैतिक डाक्टरहरुले । गरीव त बेच्ने केही नपाएपछि लालाबाला पाल्न, आमाबाबुको औषधिमूलो गर्न, छाक टार्न शरीर बेच्छन्, पेटमा बच्चा आयो भने फाल्नुको बिकल्प नै रहन्न । यतिबेला युवा बर्गमा सेक्स यति सामान्य बन्न पुगेको छ कि टोलटोलमा मेरी स्टोप्सको, बैधानिक नामका अवैधानिक बच्चा फाल्ने धन्दा चलेको छ कि देख्दैमा लज्जाबोध हुन्छ । नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान हुनै नपर्ने, आमाले मेरो छोरा छोरी भनेपछि नागरिकता दिनुपर्ने मुद्दाले पनि ठूलै कोकोहोलो मच्चाएको छ । यति गम्भीर मुद्दामा राष्ट्रिय स्तरमा बहस भएकै छैन । कसरी अघि बढ्ने आजको सामाजिक समस्या हो ।
नारी दिवस आयो गयो । छोरा नै चाहिन्छ, छोरी समस्या हुन्, छोरी किन चाहियो भन्दै छोरीको भ्रुण हत्या गर्ने र घरेलु हिंसाको सिलसिला जारी छ ।
नारी दिवस आयो गयो । नारीमाथि असमानता र विभेद जारी छ ।
नारी दिवस आयो, नारीलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन स्तरमा भूमिका दिनुहुन्न, नारी असक्षम हुन्छे, पुरुष नै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ भन्ने सोच जारी छ ।
देशमा नारीको सम्मान भाषणमा र देखावटीमा सिमित छ । यथार्थमा नारीलाई शोभा, सौख र बच्चा जन्माउने कारखानामा सिमित राखिएको छ । यस्तो पुरुष सोचमा परिवर्तन नल्याएसम्म नारी दिवस किन मनाउने ?